ဖခင်ရဲ့ မတော်တရော်ပြုလုပ်မှုကို ခံရပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ မိန်း ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်….!v – Myanmar
ဖခင်ရဲ့ မတော်တရော်ပြုလုပ်မှုကို ခံရပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ မိန်း ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်….!v
November 2, 2020 admin Life Style 0
ဘာမှမရေးခင် ကြိုပြောပြပါ့မယ်။ ကျွန်မ မိန်း ကလေးတစ်ယောက် ကျွန်မချစ်သူကလဲ မိန်း ကလေးတစ်ယောက်ပါ။
သူများတွေအတွက် အဖေဆိုတာ သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်မအတွက်ကတော့လုံးဝမမှန်ဘူး။ ၉ နှစ် ၁၀ နှစ် အရွယ်လေး နင်းခိုင်းတာ သူ့ပေါင်ခွကြားနားအထိ။ အဲ့တုန်းကဘာမှ နားမလည်ဘူး နင်းပေးဆို နင်းပေးလိုက်တာပဲ ။ စိတ်ထဲမှာ ကလေးပီပီ ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးပျော်လို့။ အပျိုဖော်ဝင်ကာစအရွယ်အိမ်ကအုတ်ရေကန်မှာရေချိုးတော့ သူကဝင်ချိုးတယ်။ ပြောလာတယ် နင် ခွကြားတွေဘာတွေ နှိုက်မဆေးဘူးလားတဲ့လေ ။
သူဘယ်အချိန် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အခွင့်အရေးယူဦးမလဲလို့တွေးပြီး ကျီးလန့်စာ စားနေခဲ့ရတာ။ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ လောကမှာရှိတဲ့ အဖေတွေအကုန်လုံးက သမီးတွေအပေါ်ဒါမျိုးချည်းပဲလားလို့အတွေးတောင်ဝင်ခဲ့တာ။ အားငယ်စိတ်တွေ အားကိုးရာမဲ့ တွယ်ရာမဲ့စိတ်တွေ အချိန်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာ။ ကျွန်မအဖေကို စကားမပြောတာ ၂၀ ကျော်အရွယ်ကတည်းက။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲက ဒဏ်ရာတွေက လုံးဝမပျောက်တော့ဘူး။ လူတွေနဲ့စကားပြောတိုင်း တစ်ဆင့်နိမ့်နေတဲ့လူလိုခံစားရပြီးစကားပြောနည်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာသလိုတောင်ဖြစ်ခဲ့တာ။
ယောကျ်ားယူ ကလေးမွေးရင် ငါမွေးတဲ့ငါ့သမီးလေးကိုလဲ ငါ့ယောကျ်ား သူ့အဖေက ကြံစည်ဦးမှာပဲဆိုတဲ့ စိတ္တဇဖြစ်သွားတာ အခုထိ။ ယောကျ်ားတွေဆိုရင် လုံးဝ အထိမခံချင် အသံတောင်မကြားချင်တော့ပဲ လာသမျှ ယောကျ်ားတွေ ပစ်ပစ်ခါခါ ပြောဆိုပစ်ခဲ့တာ။ ဘယ်ယောကျ်ားကိုမှ မယုံနိုင်တာ အခုအသက် ၂၅ ကျော်တဲ့အထိကိုပဲ။ ကျွန်မ မိန်းကလေးချင်းချစ်မိတာ နဂို စိတ်အခံကြောင့်လဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ၊ ငယ်ငယ်တုန်းကအဖေလုပ်သူရဲ့sexualharrassement ကြောင့် ယောကျ်ားတွေကိုရွံသွားတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုကတော့ ကျွန်မလို victims တွေအများကြီးပဲဆိုတာရယ်၊ ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာတရားတွေရဲ့အကာကွယ်ယူပြီးဖခင်မဖြစ်ထိုက်တဲ့paedophile တွေအများကြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ဆိုတာတွေပဲ။
ရှားပါးရောဂါကြောင့် အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးသွားတဲ့ချစ်သူဘေးမှာ တစ်သက်လုံးနေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
လူတွေရဲ့ အသိစိတ်ဓာတ်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကြောင့် ဒုက္ခတွေ့နေရတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ